Waa maxay flash drive USB?
Waa mid ka mid ah noocyada ugu badan oo ka mid ah qalabka lagu kaydiyo dibadda in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira si ay u hesho xarunta ugu wanaagsan oo ugu horumarsan kaydinta ka dhigi kara. Qiimaha drive USB ay ku xidhan tahay ku dul meel lagu kaydiyo in la bixiyo iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo farsamo ugu horumarsan waa in la isticmaalaa si loo hubiyo in drive la iibsaday iyo tayada ay tahay wax in in mudnaan la siiyo. Ka dib markii qaar ka mid ah arrimaha la xidhiidha drive kaydinta USB wanaagsan:
Waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee muujinaya in awoodiisa guud ee shirkadda ayaa soo saartay drive sida USB ah 2.0 interface waxaa dhacsan iyo USB 3.0 interface ayaa si aad u hubiso in user helo ugu fiican oo laga qaaday meeshiisii ​​habka ugu wanaagsan gobolka of farshaxanka qoreysa in la xiriira qalabka. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in halka lagu iibsado waxaa la sameeyey version interface USB waxaa hubaal baaro hab ugu fiican.
Waa arrin kale ugu muhiimsan in loo tixgeliyo in arrintan la xiriira iyo user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo farsamo ugu horumarsan oo aan la raacin oo keli ah in arrintan la xiriira, laakiin shirkada waxaa loo doortay in la og yahay in la abuuro ugu fiican ee ka mid ah ugu fiican. Shirkadaha caanka ah ee arrintan la xiriira waa Kingston iyo SanDisk in lagu soo koraya drives ee sida ugu wanaagsan si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in had iyo jeer raadiyaan shirkadda iyo qiimaha ay tahay in la daradu.
Ma USB kasta qaban karaan hawsha marka laga reebo kaydinta xogta sida ay tahay horumarinta oo uu soo bilowday kaliya shirkadaha waaweyn in drives ay qaban karaan sida ugu fiican oo gobolka functionalities farshaxanka. Mar qiimaha marna waa in la tixgeliyo halka USB ah ayaa lagu iibsaday halkii user waa in la geeyo ee geynta iyo tayada in uu yahay ka ugu wanaagsan iyo qalabka ugu horumarsan oo loo isticmaali karo si ay u falanqeeyaan USB isticmaalka mustaqbalka iyo arrimaha kale ee la xiriira.
Kor ku soo sheegnay waxay ka mid tahay arrimaha ay tahay in la tixgeliyaa halka USB ah ayaa lagu iibsaday si kastaba ha ahaatee waa in la ogaadaa in liiska uusan ku dhamaan oo user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka USB drive tahay la doortay ka dib markii xulashada shirkadda tayo leh sida ay drive Cudarada doonaa dhammaan sifooyinka in lagu kor lagu soo sheegay oo sidoo kale hubin doona in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka la eego qiimaha lacagta ay helaan arrintan la xiriira. Gadashada USB wanaagsan ayaa sidoo kale hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan.
Tutorial aasaasiga ah - sida loo isticmaalo USB flash drive
Drive USB ayaa ugu horayn waxa loo isticmaalaa sida il of kaydinta xogta iyo kala iibsiga maadaama ay la soo saaro isla ujeeddadaas. Waxa intaa dheer in wareejinta xogta shaqo aasaasiga ah ee qalabka USB sidoo kale waa in la hubiyo in xogta la ilaaliyey oo ammaan ah . Firmware ee drive waa in la dhisay in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira in kada kasta oo khatar ku furin iyo virus suurto gal ah in arrintan la xiriira.
Dayactirka guud ee xogta la dheer waarta haddii user waa inuu xaqiijiyo in drive USB waa la hayaa meel qabow oo qalalan sidoo kale in la hubiyo in baaritaan antivirus waxaa sidoo kale xilliyo sameeyo.
Tutorial Advance - siyaabo ka badan oo la isticmaalayo flash USB
Sida feature sare drive USB ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in xogta la kala saaro habka ugu fiican. The fayl ku jira in la sameeyo galay drive waa in la hubiyo in ay sidoo kale la hayo si user marnaba wajahaya arin kasta halka uu doonayo in uu helo xogta oo uu doono. Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka la isticmaalo si dadban by user kasta laakiin waxaa la iska indho iyo hubaal waxaa loo arki karaa mid ka mid ah hababka ugu fiican oo ugu horumarsan ee isticmaalaya flash drive USB sidii markii hore aan la sameeyey oo sababtaas tan 
Ultimate tutorial - siyaabo ka badan hal abuur leh isticmaalka USB flash drive
Tusaale kama dambaysta ah waa in la ogaadaa in drive USB ah loo isticmaali karo in ay xirto iyo computer hab ugu wanaagsan ee lagu furo iyo in la hubiyo in ay wali gaari ee ifbaxay ah. Ilaa USB aan la geliyo dekedda computer ma siin doonaa helitaanka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ay mar kale wax yaabahan in inta badan dadka isticmaala ay u adeegsan, waa xoogaa farsamo ee dabiiciga ah iyo qof kasta oo aan awoodno hirgeliyaan isbedelada USB fudayd iyo qanacsanaanta. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeeg tahay waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira iyo user helo natiijada ugu wanaagsan iyo waliba.
Sidee badan oo kor ku xusan siyaabo ayaa la isku dayay iyo fikrado cusub oo arrintan la xiriira?
Si aad u noqoto sax ah iyo in meesha ugu dadka ogahay in USB ah waxa loo isticmaalaa qalab lagu kaydiyo xogta iyo sabab la mid ah waxa loo isticmaalaa ujeedadaas oo kaliya kor ku xusan oo dhan shaki si tutorial aasaasiga ah waa guusha arrintan la xiriira. Marka ay timaado in siyaabo ka badan hal abuur ka dibna soo socda waa qaar ka mid ah qodobada ku jira in la tixgeliyo:
1. codsiyada la qaadi karo Orodka
2. rakibo OS Guud
3. karo Data
Waxaa jira siyaabo kale oo user sahamin waa in arrintan la xiriira oo ay tahay in la xuso in baadhi internetka siiyaan gacan.
> Resource > Flash Drive > In ka badan waxaad ka fekeri karaa - waxa ah flash drive USB qaban karin